Deg Deg:Dhiigya Cab U Dhashay Maraykan Oo Garoowe Ku Aroostay | khaatumonews
Deg Deg:Dhiigya Cab U Dhashay Maraykan Oo Garoowe Ku Aroostay
Jun 21, 2018 - 10 Aragtiyood
Browns Camp July 2009 ayuu dilay u gaystay oday 73 jira ah jun 2018 xalay wuxuu ku aqal galay garoowe?
Mowduucaan ayaa waxaa igu dhaliyay ka dib markii aan daawaday sawiro laga soo qaaday arooska wiil u dhashay dalka Maraykanka oo horey maxkamada ugu xukuntay dambiyo iyo gabar Soomaali ah oo ka dhacay magaalada garoowe.
Maxkamad ku taal dalka Maraykanka gaar ahaan gobalka Western Washington County ayaa dambi ku heshay browns Camp kadib markii ay rasaas ka dhacday xero uu ku sugan xiliga uu dilku ka dhacayey.
Tuhmano ku xigeenaa dhibanaha ayaa sheegay in ay
ujeedan markii ay dhacaysay toogashadu waliba waxaay ku markhaati fureen inuu browns ahaa ninkii gacanta gaystay.
Sido kale waxay maxkamadu ku soo oogatay inuu isticmaalay hub sharci daro ah wuxuna madashii ka qirtay in uu galay labada dambi sidaasna ay maxkamadu ay ugu xuntay shan sano iyo 10 bilood oo xabsi ah waxaan xabsigaaas soo raaca laguna amray in uu bixiyo lacag dhan $600 kun oo dollar.
20 jun 2018 browns waxay u aheyd habeen xasuus gaar ah u leh?
Browns comp oo wata magaac yaasin browns ayaa xalay aqal galkiisi labada ku galay magalada garoowe ee caasumada dowlada puntland,waxayna dadka magalada uga dhignayda wax iska caadi sababto ah yaasin browns ma aheyn nin sheekadiisa la wadda hayo ama ay hubisay wasaradda arrimaha gudaha ee ku shaqada leh arrimaha socdaalka gudaha.
Waxaa lama huraan ah in ay wasaradda arrimaha gudaha qaadato doorkeedii muhiimka ahaa iyo in la hubiyo ajnabiga dalka soo galay in ay yihin dad aan dalkoodii wax dhib ah ka soo galin markaas kadibna loo fasaxo inuu gudaha dalka u gali karo laakine waxaa meesha ka muuqta in ay wasaradu shaqadeedii ay ka soo bixi wayday.
RIIX HALKAN WARGESYADA MARAYKANKA QORAY
sheeko snm baabad moodaa iyadana dil mujrim baxsada
Kkkkkkkkkk.garoowe bal wax dhilo darood taagan meshaa eega .nin waaxida kuma jiro. Kan cadaanka ahi ka noolaa la dhac . Waa dhaqanka naagaha daaroodka. Raga daroodkuna waa ku faraxsan yihiin weliba ceebtooda sawiray ka soo qaadayaan. Waa dad dhintay. Kkkkkkkkk
Daarood afkaaga qurunkiisa ka jeedi xaaraan xaaranku dhalay, hadii kale afkaa cag lagaala dahacayaa..
Xafladu waa mid dumar kaliya ah , dhaqankii suubanaa baa meesha ka muuqda laakiin sida muuqata nin dhaqan iyo diin wax ka yaqaan uma muuqatid.
So U better shut the fuck up as hall
AAMIIN G says:
WAXANI WAA FATAALNIMO (CUCKLOD NIMO? RAGBAABAA KUFARAXSAN OO ISKUSAWIRAY
Waxay tani kamid tahay dhibaatada dalkeena kajirta iyo qaran la’aanta nahaysata dalkiibaaba beeca. Criminal ayaa buux dhaafiyay dadka dambiyada gala meshay kudhuuntaan ayay noqotay wasaaradaad sheegayso dhagaxaanta iyo macdanta la boobayo mayka hadasho. MUQDISHO MAAHAN SOMALIA SOMALIA MAAHAN MUQDISHO. DAGADAHA DALKUNA WAA BEEC SAFAARADANA GOBOLADA DAWKADAHA AJANABIGAA HAKAFURTAAN.
Dawladaha ajanabigaa. I mean
Ninkani waa GAAL waliba Criminal weeyn ah oo USA wanted ka ah, waanaa dilaa weeyn.
Anyway madheedheen marka horeba dhilo, khaniisnimo iyo gaalnimo bay dadka dheerayeenee waa uun iska cadadoodiyee halayaabina.
KHANIS KI IMAMKA AUSTRALIA (WARSAME ) reer qardhood.
Waxaad ceebta u taqaanba iyana caadadood halamash madheedheen
Ceebay tacaal iyo biddood Halamash naagood awalba Gaaladay u niikin jireene Rufyaaniintii asqaysnaa ee maagahooda kireyn jirey criminals kii cannibals ee xashiisadda Garoowe kaga gacanacsan jirey ee ay u fataali jireen ayaabay ku faanayaan ❓👎👎👎👎👎 Allaw hanna doorin Sida Daaroodka dugaagoobay
Somali ba midan dhiig galin makujiro iyagu waliba Muslim dhiigis bay qaban gaalgal dilay oo muslimay maxa laga raba